Ama-movie amaHorror ahamba phambili ongawabuka - Okthoba 2020 (Kubuyekeziwe) - Ezokuzijabulisa
Ama-Movie amaHorror amahle kakhulu ongawabuka - Ungazibukeli Wedwa
Amabhayisikobho obuciko obesabekayo asikhathi sonke awanakulindeleka. Awusoze wazi ukuthi izifikani zokugcina zizofika nini, nokuthi kuthiwani, ama-movie wesabekayo awanawo ama-jumpscares. Kunalokho lezi zingcono ekugcineni izimfihlo.Uma ulangazelela lobo bumnyama obunwabuzelayo obukhanya abuthinti nakancane. Uma ufuna ukuzwa lowo muzwa weqiniso osabekayo, lapho-ke usendaweni efanele. Ngakho-ke, ake sibe nesihlalo isikhashana futhi sisifunde kahle.
Ngezansi sineqoqo elilungisekayo lama-movie amahle kakhulu asabekayo ngo-2020. Kumelwe sithi, lawa ma-movie ayinhlanganisela ehlambalazayo yezibazi ezintsha nezindala. Ngakho-ke, ake sihlale phansi, sicishe amalambu, futhi silungele ukuba nesipoki.
Ama-movie amahle kakhulu wokubuka ngo-2020:
Ukusuka kuma-slasher kuya ezilo nakumahhotela ahaunted, nanka amanye ama-movie amahle kakhulu owabukayo ngo-2020.
1. Ukukhanya (1980)
Shining 1980 ingenye yama-movie asabekayo ukubukwa. Ukusebenza okungenamikhono kukaJack Nicholson njengoba le ndoda igxumela ebubini bokubulala eya ekuqondeni okungapheli kukaKubrick njengoba elandela ngokukhohlisa uDanny ngenkathi ezulazula emaphaseji ehhotela ku-trike yakhe. I-movie ayikaze ikuvumele uhlale phezu kwesihlalo.
Kufana nokunqunywa yindoda ehlanyayo edakiwe. Kepha okuzayo ngokulandelayo kuyethusa. Intombazane encane eqoshiwe, Ukuphakanyiswa kwegazi, nokwesaba okungena endlini yangasese engu-237, yilokhu ozokuthola ngokulandelayo ku-movie.
Kulungile ukusho ukuthi akukho mzuzwana ku-movie lapho ungasho khona ukuthi awethuki. Indaba eyethusayo ifihliwe nje ngaphansi komndeni ophelele ojabule-i-Ari Aster ekuqaleni iholelwa nguToni Collette othukuthele. Le movie ifaka umama womndeni ososizini-ukushona kwabathumele ama-shockwaves kuwo wonke amakhaya abo.
Ngesikhathi samahora amabili wama-movie, awuzizwa ngesikhathi ungama bese uphefumula kakhulu. Konke ukudutshulwa komculi kaCollette ku-movie kwakha i-cyclorama encane ezwakala isongela, futhi zonke izingxoxo ezinenkani phakathi kwentsha yomndeni zikunikeza ukwethuka isikhashana.
Bhalisela i-Prime Video Trial Free
Singatha i-2020 i-movie eshaqisa kunazo zonke okwamanje ongayibuka esikhathini sokuhlukaniswa. Ngokusekelwe ekuhlaselweni kukaRomero komthengi, iphupho laseMelika lilandelela abasindile abane abangcono kunhlekelele yeZombie njengoba befika enxanxatheleni yezitolo.
Hhayi-ke, singakhuluma ngokushelelayo ngokusebenzisana okuku-movie, futhi lokho kuyabazeka. Obunye ubuchwepheshe besimanje nobuchwepheshe obusha benza i-movie esabekayo ephelele ukubukwa ngo-2020. Yilokhu umqondisi, uRob savage, angadala kule nkathi yokukhiya. Kuyathakazelisa ukubuka ukuthi basinda kanjani ekuhlaselweni yiZombies.
Bhalisela i-Netflix Student Discount
4. Izinto (1982)
I-movie yento ihlala ingenye yezimo ezishaqisayo nezishubile ezikhazimulayo zaso sonke isikhathi. Iqembu labantu baseMelika esiteshini sokucwaninga sase-Antarctica lithatha umfokazi. Hhayi-ke, izinto ezithelele igazi. Okusabisayo ngale movie ukuthi idala ukuphambana okukhulu nokwethuka okunamachashaza okuyingxenye ukusabalalisa ukutheleleka.
Kodwa kuze kube manje, imizamo ebonakalayo kanye nesibopho kuRob Bottin osemncane kanye noStan Winston ongavunyelwe yizinkanyezi zangempela ezinqunywe ikhanda, ikhanda lihluma imilenze, nemizimba yeluliwe. Umbono we-movie nezilo ezibulalayo akuyona into engaphansi kwephupho elibi langempela.
5. I-Exorcist (1973)
I-Exorcist ifana ncamashi ne-movie ekhanyayo, futhi yingakho ifinyelela indawo yesihlanu ohlwini lwethu. I-movie ayilindelekile futhi iyesabeka njengoba ifaka inganekwane kaRegan, indodakazi yomlingisi we-movie ophumelelayo, othi ngolunye usuku acashe egumbini elingaphansi ngenkathi edlala nebhodi le-Ouija. Kodwa-ke, intombazane ifuna ukwenza izinto ezihlukile nebhodi.
Phumula umlando owethusayo lapho i-titular exorcist ifika ku-movie. Yize i-movie imane isuselwa endaweni elula kakhulu, ibuye ifake nokukhuthaza ukukhathazeka okungakuvumeli ukuba uhlale kusofa.Abadlali bebefriziwe efrijini lokulala, badonswa ngokomzimba kumasethi ukuze baphinde babe namandla ngokomzimba. I-movie iyesabeka kakhulu futhi kufanele uyibuke ngokuhlukaniswa.
I-movie icishe ifane nesiqu kanye ne-slash. IHalloween ibeka okunye ukuphawula okujwayelekile kwebhayisikobho enhle kakhulu engeke ifane. Umbazi uqamba isibhamu sakhe esikuvumela ukuthi uqagele, ukuvezwa okwesabekayo, bese uwahlanganisa womabili ne-claustrophobia.
Izingoma ezingalawuleki nokuzwa ukuba sengozini kwanoma yini eyenzeka ku-movie kukuvumela ukuthi umemeze isikhashana. Kungaleso sizathu ukuthi ukushaywa kwe-doom-synth kusesabeka ngokwesabekayo.
6. Imihlathi (1975)
Ngaphambi kokufika kwama-Et namanye ama-movie amemezayo, kwakukhona i-movie Jaw, eyenziwe yi-movie ye-toothy horror kaSteven Spielberg. Le movie ikuhlupha isikhathi eside ngoba ushaka ophindiselayo wonakalisa uhambo lwawo wonke umuntu olwandle.
Lolu hambo olwesabekayo olugcwele ukwesaba phezu kwamagagasi olwandle kanye noshaka abasebenzisa imali kukugcina unamahloni sonke isikhathi. Izingane ziyafa, inja iyafa, amakhanda antantayo phezu kwezikebhe ezicwile. Kwanele ukusho ngale movie nokwethuka okuzwayo ngenkathi ubuka i-movie.
I-Alien yi-movie eqanjiwe yesayensi eyenziwe nge-movie enkulu kakhulu esabisayo. Ekuqaleni ucingo lokucindezeleka luvela esikhaleni sasemkhathini sabafokazi, izilo ezesabekayo. UScott uthumela abasebenzi beNostromo yabo ukuthi bayophenya ngalokhu. Ukwesaba kuyajula njengoba ucabanga, futhi isidalwa sidale ama-multilayers angenamkhawulo wokuthuthumela kocansi.
Futhi, ukungaqondakali okubonakalayo kokuqondisa kweScotts ngesikhathi sesenzo sokugcina ukudala ukungezwani. Uma ufuna ukuzwa i-movie yangempela ethusayo, kumele bakwenzele lokhu.
I-movie esabekayo ifike ngasekupheleni kweminyaka yama-90. I-slasher trope yayixakile idinga inkomishi ye-espresso enamandla. Kodwa lokho akuthola kwakuwukumemeza kwamaWes Cravens. Isifihla-buso sokumemeza sisekelwe kumdwebo we-munch ongase usontwe ungene enjabulweni yetshe.
Ukukhala kuhlala kungalindelekile, futhi izisulu ziyaqhubeka nokugawula ummese wama-slasher. Umdlalo wokuphela ucindezela kakhulu futhi uyazibuza kuze kube sekupheleni, ngubani ozosinda.
I-iphone 5 ibambeke kwilogo ye-itunes futhi ngeke ibuyiselwe
lapho ongabuka khona ama-movie online mahhala
minecraft ungayifaka kanjani inqama
isithombe senkosi sokuqabula i-anime
iyiphi inguqulo ye-Android eyi-bluestacks